Suede Plastic noma foamiran - Foam impahla, wayevame ukusebenzisa Abahlobisi futhi Florists ukudala imikhiqizo ekhangayo futhi imvelo, kuhlanganise ubucwebe kanye izesekeli wezangaphakathi. It isetshenziswa ukudala izimbali needlewomen yokufakelwa ukuthi kukhona izakhamuzi zaseBosnia zifana kusuka zemvelo. Indaba nezimo, kungase kubonise ezakheke kahle futhi kumnandi uma uyithinta. Lesi sigaba master iyobheka indlela yokwenza izimbali kusuka foamirana isibonelo hydrangeas. Kukhona ukusetshenziswa eziningi imikhiqizo okuholela. Ngokwesibonelo, womshini lomshado sezimbali, iziqhano zokuhloba noma hairpins.
Izinto ngokudala hydrangea
Ngaphambi kokwenza izimbali kusuka foamirana, kudingeka alungiselele konke okudingekile. Ungathenga simiselwe Scrapbooking, lapho isakhiwo kukhona ezacile plastic Suede. Akunjalo ngempela ingasetshenziswa ukudala bamphathele imisindo ehlukahlukene. Uma umbukiso emcabangweni zifezeke imininingwane, nemiqumbe yesihlahla se yimuphi umbala uyobheka zemvelo. Ukwakha hydrangea ka foamirana izosebenzisa ukushuba impahla 5 mm.
Kusukela izinto futhi kudingeka:
uwoyela iyashintsha iyaphupha ibe;
tape Floral ;
Ukwenza izimbali amacembe hydrangea
Ungasisika hydrangea amacembe kusukela isifanekiso noma usike ishidi foamirana tikwele 2x2 cm ngibenze ku izimbali umumo okhululekile. Uma usebenzisa ukudala izingcezu ezimbili imibala - namahlamvu ezimbili noma ezine, inflorescence ke uzobheka zinkulu futhi lemvelo. Iqiniso lokuthi e imvelo ngokuvamile hydrangea imbali libukeka kanje: omunye isigcebe sembali phezulu, bese - ambalwa amacembe, nomunye ezansi. Enye - ambalwa amacembe phezulu futhi ezimbili phansi. izimbali okunjalo hydrangeas ka foamirana engingayenza uma ngifuna uthole inflorescence okungukuthi izakhamuzi zaseBosnia zifana kusuka samanje, kodwa inqubo kakhulu isikhathi. Ngakho-ke kulula ukuqoqa inflorescence imbali nge amacembe ezine, noma amabili namabhuzu iyizingxenye. Uma sihlanganise zombili izinhlobo, uthola inketho ukuthi liseduze kakhulu lokhu inflorescence.
Hydrangea ka foamirana: anombala amacembe
umbala we-tint ukhetha ngokwakho. Ngokwemvelo, lokhu inflorescence izihlahlana ngokuvamile kakhulu okwesibhakabhaka, zibe bomvana noma amhlophe. Uma umsebenzi ukuthatha foamiran ezimhlophe, kulula iyashintsha iyaphupha ibe namafutha toned futhi unike hydrangea izimbali cishe kunoma iyiphi umthunzi. Umbala lisetshenzisiwe amacembe nhlangothi zombili. Ukuze wenze okwengeziwe ihlumela yemvelo ngamunye iqabunga, ukusebenzisa amafutha pastels eziningi imibala. Uma usebenzisa ikhava indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka phakathi imbali iyashintsha iyaphupha ibe crosswise ezimhlophe wachitha imigqa emibili obukhulu kanye amacembe, bese zisebenza imivimbo ezincane phakathi. Senza konke izikhala, kuhlanganise amahlumela double.
Ukwenza amaphetheni uphinde amacembe staining
Ukuze isicelo ku yokubhila hydrangea foamirana izosebenzisa MDL ishidi. Uma kungenjalo, ungenza ngelakho izandla MDL kusukela polymer ubumba noma uthathe iphepha lukathayela nge isakhiwo efanayo.
Ashisise imininingwane yensimbi: Emathileyi ithebhu ematheni ichopho futhi zizosetshenziswa Molde, okwenza umbono.
Phinda kuwo wonke amacembe nhlangothi zombili, ukuvula ngakuwe. Dweba isakhiwo preform nhlobo.
Manje, futhi, thina ukupenda izimbali, kodwa lokhu sisebenzisa iyashintsha iyaphupha ibe luhlaza. Toning kukushiya onqenqemeni.
Dweba iyashintsha iyaphupha ibe onsomi, esehlanganise ngokuphelele zonke izingxenye workpiece, ngaphezu Midway.
I enamathela kwenza kube emithanjeni esicace kakhulu phezu amacembe kanye unezela inflorescence engokwemvelo. Ungasebenzisa iyashintsha iyaphupha ibe ezomile, silusebenzise ne ibhulashi futhi rastushovyvaya.
Lapho zonke izinto kudaywa maphakathi imbali ngayinye kuzomele wenze umgodi ukuze stamens ngosungulo noma cautery. Emva ekucubunguleni zonke izikhala seziqala ukubanika ukuma, skalyvaya amacembe izikhathi eziningana futhi ezimazombe kubo phakathi iminwe yakho. Khona-ke qondanisa imbali, ukufuthelana ku-ayina egoba emaphethelweni isigcebe sembali ngamunye, alo in isigamu futhi edonsa. Ngingabi ejikeni abukhali.
Siqala ukukha izimbali: Sebenzisa i-glue obala ichopho stamen bese kubekwa phezu kwakhe kunye four-leaf noma amabili pair. Ungenza terry inflorescences. Khona-ke bese zihlanganiswa izimbali siphelile nomunye ukwakha isixha. Fix it ngocingo. Umlenze eduze iphepha lukathayela noma tape ezimibalabala. kungenziwa Ngesicelo ukwakheka ungeze amahlamvu. Imi yabo kusukela foamirana isakhiwo oluhlaza futhi kusetshenziswe ngendlela efanayo ukuthi emacembeni ezimbali ezintekenteke. Ukuze aqinisekise isixha ukuze underside amaqabunga unamathele wire. Umkhiqizo manje isilungele ukusetshenziswa e izingoma ezimibalabala noma ukudala ubucwebe.
Easy wesifunda shawls (spokes): isithombe kanye nencazelo yomsebenzi
Indlela tie hook round mat (Wabasaqalayo)? Incazelo, scheme, izithombe
Izingane Appliqué izimbali. Sifundisa izingane ukwakha ubuhle ngezandla
Uyathanda bear isondo? Indlela ukukwenza, uzofunda lapha
Umshini ezivuzayo: ubuchwepheshe kanye nezinhlobo. Umshini uthunge: nezixhumi, onqenqemeni
Uphi i-Mount Shkhara? Ukuphakama kwalo, incazelo
Isilinganiso samanani wonyaka. Indlela yokubala
Izimpi ezinkulu kunazo zonke ze-Great Patriotic War emlandweni wemlando: amagama, itafula
Playing Cards. Card tricks.
"Soultz" - unamathisele kusuka nezinwele. Amazwana isicelo
Uchungechunge oluthi "ikhambi ngahluleki": nabalingisi izindima
Izidakamizwa "Tempalgin": yokusetshenziswa, ukwakheka, izakhiwo